Shirkadda JOYSUN waxaa la aasaasay 2005, waxay diirada saareysaa soo saarista wakiilka xumbada caaga ah, waxyaabaha lagu daro WPC iyo PVC Ca-Zn stabilizer, waxay uqalantay R & D waxayna bixisaa adeeg dhoofineed sidoo kale. Ka sokow soosaarka lagu daro, JOYSUN waa adeeg bixiye farsamo iyo dhiirrigeliye ee caag & caag duurka ku.
Ku qalabaysan in ka badan 10 qalab wax soo saar otomaatig ah iyo nus-otomaatig ah, oo leh wax soo saar sanadle ah 30,000 tan oo caag iyo waxyaabo balaastig ah lagu daro.
2 qalabka pelletizing, oo leh awood wax soo saar sanadle ah 2000T walxaha xumbada xumbaynaya.
Khaanadaha casriga ah ee lagu kaydiyo mobilada, keydka go'an ee 4000 tan oo alaab ah.
86 nooc oo ah qalab tijaabo xirfadeed sida ThermoFisher infra-red spectrometer ， STA / TGA, STA / DSC iwm
Kooxda R&D ee PHD, asalka waxbarashada Master.
In ka badan 20 shatiyada wax soo saarka, iyo natiijooyin farsamo oo kooban ayaa la helay.
Shirkaddu waxay ku socotaa shahaadada ISO, soosaarida otomaatiga ah iyo qalabka baakadaha waxaa ka shaqeeya farsamo yaqaanno xirfad leh, waxay dammaanad qaadayaan tayada iyo xasiloonida badeecada, shakhsiyadda aad u fiican iyo tayada aadka u fiican waa falsafadda shirkadda JOYSUN, waxaan ku siin doonnaa waxyaabo lagu daro kharash-ku-ool ah iyo xalal isku dhafan oo loogu talagalay warshadaha polymer.
Caymiska Suuqa & Dakhliga Iibka
1.Solutions for Palstic & caag bixiyaha
Si loo daboolo baahiyahaaga wax soo saar, kooxdayada farsamada ee aqoonta wax soo saarka xirfadeed u leh waxay adeegsadaan khibrad warshadeed iyo xog hodan ah si ay u bixiyaan xalal wax soo saar, oo ay ku jiraan qaaciidooyinka, teknolojiyada iwm waxay kaa caawinayaan inaad ka gudubto caqabadaha habab dhaqameedka ah isla markaana aad u gaarsiiso koritaanka isbeddel sii kordhaya oo sii kordhaya suuqa.
1.WPC / SPC Floor (Ca-Zn xasilin)
2.Muuqaalka sawirka PS / PVC (CF wakiilka xumbaynaya)
3.PVC / Dharka dharka (wakiilka xumbada xiiraya)
4.Gudiga darbiga PVC / astaanta (wakiilka xumbada / xasiliyaha ca-zn)
5.Qalabka Guryaha la isku duro (wakiilka xumbaynaya masterbatch)
6.Xaashida xumbada PVC (cadaan sare / wakiilka xumbada unug isku mid ah)
7.PE / PP hang hang (duritaanka wakiilka xumbada yareynta iyo ka-hortagga yareynta)
8.Alaabta lagu ciyaaro ee duritaanka (PS / ABS / PC masterbatch wakiilka xumbada)
9.Kabaha caaga ah (aan / hooseynin wakiilka xumbaynaya amonia)
10.Gawaarida otomaatiga ah (TPE / TPV / EPDM xumbo wakiilka)
11.Gawaarida Gawaarida / Dashboardka (Wakiilka xumbada fudud ee gudaha)
12.Nidaamka otomaatiga ah ee NVH (NVH Sealant ballaarin)
13.Yoga Mat (Wakiilka xumbo ee EVA / XPE)
14.Nooca Diyaaradda EPP (Wakiilka Nucleation xumbo jirka)
15.PE / PP / PVC WPC Decking (taxane H saliid isku dhafan)